မည်သည့် Live CD မှမဆို Gentoo တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာ Linux မှ
x11tete11x | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
မင်္ဂလာပါ x11tete11xဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယအလှူငွေဖြစ်သည်။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင်သင်ခန်းစာထည့်သွင်းမှုကိုသင်ပို့ပေးပါလိမ့်မည် Gentoo
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရရင်သင်လိုချင်တာအားလုံးထဲမှာရှိမယ် Gentoo ဝီကီဒါမှမဟုတ် ဝီကီ ​​Archတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများကို Gentoo လက်စွဲစာအုပ်တွင်တွေ့ရသည်။ ငါကဒီသင်ခန်းစာကိုလုပ်တယ်။ လူအတော်များများကအဲဒါကိုတောင်းပြီး၊ Gentoo ကိုသွင်းတဲ့အခါငါစိတ်ကြိုက် granite ထည့်မယ်။
သိတယ် စာဖတ်သူတွေကဒီ distro အတွက်အလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ပြproblemsနာအများစုကိုဝီကီကိုဖတ်ပြီးသုတေသနအနည်းငယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည့် distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြီး "ဝီကီကိုကြည့်ပါ" ဟုဖြေလျှင်ဆိုလိုသည်မှာ Gentoo အသုံးပြုသူအနေဖြင့်သင်လုပ်နေသည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။ xD) ။ ဒီအချက်ကသံသယတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး
ယခုငါ Gentoo အကြောင်း, ဘာကဒီလောက်သိသာသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းနှင့်အခြား Linux distros များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဘယ်သို့သောအကြောင်းဆွေးနွေးသွားမယ်။ ကျနော်တို့အခြေခံကိုမှစတင်ပါလိမ့်မယ် Gentoo သည် source code ကိုအခြေခံသော distro ဖြစ်သည်, ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? တူသောသမားရိုးကျ (precompiled) distros များနှင့်မတူဘဲ debian, Ubuntu ကို, မုတ်, Manjaro, Fedora, SUSEနှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့ကိုစသည်တို့; package တစ်ခုကို install လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည် executable (binary, .deb, .rpm, .pkg.tar.xz စသည်) ကို download လုပ်၍ မထည့်သွင်းပါ။ ၎င်းကို၎င်း၏ source code ကို download လုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဆက်ဆာနှင့်မည်သည့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီမစုဆောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် package များအတွက်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းနှင့်အတူ၎င်းသည်ထို့နောက်တပ်ဆင်သော executable ကိုထုတ်ပေးသည်။
ဤသည်ကွာခြားချက်တည်ရှိသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဒီ distro ထူးခြားတဲ့စေသည်အရာ, သူက packages များ compile ဆိုတဲ့အချက်ကိုမသာ, တ ဦး တည်းအထုပ်တစ်ခုချင်းစီကိုပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကို features တွေထောကျပံ့ဖို့ဆုံးဖြတ်။ အထုပ်၏စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်စုစည်းခြင်း၏တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်မှာမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဥပမာတစ်ခုကိုဥပမာပြပါရစေ။
X distcomcomiled (ကျွန်ုပ်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်သူများ) ဖြစ်ရန်၊ X distro ကိုအမျိုးမျိုးသောစက်များပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်စေရန်၊ ၎င်း၏ packets များကိုအဟောင်းစက်၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်စုစည်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကို Pentium II မှနောက်သို့ run စေလိုပါက၎င်းတို့၏ package အားလုံးကို Pentium II ညွှန်ကြားချက်အစုံနှင့်ပြုစုလိမ့်မည်။
ဒီကဘာအကျိုးဆက်များကိုဆောင်ကြဉ်းသနည်း ဘာ ပရိုဆက်ဆာအသစ်များအနေနှင့် i7 ဆိုပါစို့၊ သူသည်စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံး၏အားသာချက်ကိုရယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအကယ်၍ ၎င်းတို့သည် i7 မှပေးထားသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်စုဆောင်းပါက၊ ၎င်းသည်ယခင်ကထိုအသစ်သောညွှန်ကြားချက်များကင်းမဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်မတိုင်မီပရိုဆက်ဆာများ၌ကွပ်မျက်ခံရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Gentoo သည် source code ကို download လုပ်ပြီးသင်၏ပရိုဆက်ဆာအတွက်စုစည်းခြင်းဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အဝရရှိမည်ဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည် i7 တွင်တပ်ဆင်ပါက၎င်းသည်ညွှန်ကြားချက်အစုကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်၊ ၎င်းကို Pentium II တွင်တပ်ဆင်ပါက၎င်းသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင် packages များချင်သောထောက်ခံမှုအမျိုးအစားကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ငါသုံးတယ် KDE y Qt, ဒါကြောင့်ငါအဘို့အထောက်ခံမှုရှိခြင်း packets တွေကိုစိတ်မဝင်စား GNOME y GTKထို့ကြောင့်လည်းငါဆိုသည်ကား၊ ထိုအရာတို့ကိုမမှီကြနှင့်။ ဒီလိုမျိုး, Gentoo နှင့် distro X တို့နှင့်အတူတူအထုပ်ကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါ, Gentoo အထုပ်အများကြီးပေါ့ပါးသည်။ distro X တွင် package များသည်ယေဘူယျဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အရာရာတိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
ယခုသင်မိတ်ဆက်ပြီးရင်လမ်းညွှန်နှင့်အတူပါသောကျွန်ုပ်၏ configuration ဖိုင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါလိမ့်မည် PDF ဖိုင်ရယူရန် ငါဘာလုပ်ခဲ့လဲ Gentoo ကို Linux Live CD များမှမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း (Ubuntu ကို, Fedora, SUSE, ပြန်လာပြီ, ပိုက်ဆံ, သို့မဟုတ်စိတ်ထဲပေါ်ပေါက်လာသောအရာတစ်ခုခု) သို့မဟုတ်သူတို့တွင် Linux distro ထည့်သွင်းထားသောအခန်းကန့်။
ကျွန်ုပ်၏ Configuration Files သို့လင့်ခ်လုပ်ပါ
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ အရူးအမူးဖြစ်စေရန်အတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခုတည်း၌သာမန်တပ်ဆင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွမ်းဆောင်ရည် ၃၀% ပိုမိုမြင့်မားရန်အတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ပေးခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » မည်သည့် Live CD မှမဆို Gentoo တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာ
Haha နဲ့ငါ gentoo ထည့်သွင်းဖို့လက်စွဲစာအုပ်ကိုကြည့်တော့တာပဲ။
ငါအမြဲတမ်းဤ distro သို့အသုံးပြုသူအများအပြား၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အခြေအမြစ်မရှိသို့မဟုတ်ပါကပျင်းရိခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်
Gentoo Linux ဟာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာပါ။ ဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာအချိန်ကောင်းတွေပါ။
သတိပြုသင့်သည်မှာ (သင်၏အလုပ်ကိုအနည်းဆုံးမကြိုးစားဘဲ) Gentoo Linux ကိုသူတို့၏ကွန်ပျူတာကိုချွေတာသည့်အချိန်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်တစ်ခုရှိကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ Live DVD မှ distro ၏နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံး၊ Gnome, KDE, XFCE စသည်တို့ကို install လုပ်လိမ့်မည်) ။
အထင်ကြီးလေးစားဖွယ်ဒုတိယအလှူငွေ, သငျသညျမဟုတျလော ငါဒီလိုမြင့်မားသီအိုရီတန်ဖိုးကို၏ပံ့ပိုးမှုများကိုကြိုက်တယ်။ မင်းဟာလမ်းညွှန်ကို hahaha ထဲကိုထည့်လိုက်ရင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်း၊ နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာအထိ ... ငါမသိရဘူးလား Crux?
hahaha ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး xD hahaha
« (…) သင်၏ package အားလုံးကို Pentium II ညွှန်ကြားချက်အစု (…) »နှင့်စုစည်းပါမည်။
ဒါလုံးဝမမှန်ပါဘူး သင် package တစ်ခုကို compile လုပ်တဲ့အခါမှာ compile program ကမည်သည့်နိမ့်ဆုံးပရိုဆက်ဆာနှင့်မည်သည့်ပရိုဆက်ဆာကိုသင်စုဆောင်းချင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုယေဘူယျရွေးစရာများရှိသည်များသောအားဖြင့်ပရိုဆက်ဆာအများစုအတွက်အသင့်တော်ဆုံး binary code ကိုထုတ်လုပ်သည်။ Gentoo နှင့်အခြားသူများအကြားစွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားမှုကိုနှိုင်းယှဉ်သည့်အခြေခံစံနှုန်းများလည်းရှိပါသည်၊ သင်ထင်ထားသကဲ့သို့အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ။ မင်းတို့ထဲကတစ်ယောက်ကိုဒီမှာတွေ့နိုင်တယ် (http://socios.linuca.org/zub/zubmark-20031230.htmlအခြားသူများစွာရှိသော်လည်းမည်သူမျှအကြွင်းမဲ့အမှန်တရားအဖြစ်မယူမှတ်နိုင်သော်လည်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်သည်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာရန်အမြဲလိုအပ်သည်။
သင်၏ရေးသွင်းချက်သည်လုံးဝတိကျမှုမရှိသောမေးခွန်းများဖြစ်သောကြောင့်ဤမှတ်ချက်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ရှင်းလင်းရန်သာဖြစ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူက Gentoo ကိုနှစ်သက်တယ်၊ ငါသိတဲ့ Debian ရဲ့သီလကိုငါချီးကျူးမိတဲ့အခါတခါတလေငါဖြစ်တတ်တယ်။
အကယ်၍ သင်သည် "desktop" အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်သင်၏ hardware မှအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရယူလိုသောကြောင့်သင်၏ပရိုဆက်ဆာနှင့် ပါတ်သတ်၍ အတူတကွသွားမည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးရှင်းလင်းချက်ကိုကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ငါပြောသောအရာများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပုံရသည်ဟုနားလည်သည်။ PDF တွင် high-performance system ကို configure လုပ်ရန်အကြံပေးချက်များကိုငါ graphite ဟုခေါ်သောနည်းပညာကိုသက်ဝင်စေသည့်အလွန်တိုတောင်းသောစကားလုံးများသည် "for" ၏သံသရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာကိုအပိုဆောင်းစွမ်းဆောင်ရည် ၃၀% အထိတိုးမြှင့်သုံးစွဲသူများရှိသော်လည်းငါမြင်သောအမြင်တွင်၎င်းကိုအလံသုံးခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံး -O30 အမြင့်ဆုံးတိုးတက်မှုအဆင့်ကိုထည့်သွင်းထားပြီး၎င်းကိုလည်း kubuntu နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ဤစက်ပေါ်တွင်ခဏတာနေလျှင်ထို setup နှင့်အတူ Gentoo သည် ပို၍ မြန်သည်။ ငါရိုးရိုးသားသား, ဒီကကွပ်မျက်အချိန်၏အမိန့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ကကွပ်မျက်အချိန်၏အမိန့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ကအမိန့်3အောင်မြင်ရန်လိမ့်မယ်ပုံအဘယ်အရာကိုပုံ၏အလုပ်လုပ်ပုံကိုအများကြီးနားမလည်ခဲ့ဘူးပုံကအဘယ်သို့ 1 များအတွက်အောင်မြင်မှုလိမ့်မယ်ပုံ၏အဘို့၏သာဓကများ၏ကွပ်မျက်မှုအတွက်အများအပြား "ချည်" ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်တစ် ဦး ချည်ရန် for for iteration) သည်ဘုံ၏ order n နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ xD ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြပါကကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုအတိအကျဘာလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားရှင်းပြစေလိုပါသည်။
Agggghhhhhh comp တက်ဘလက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတည့်မတ်ပေးသည်ကိုသင်မုန်းသည်။ သင် compile လုပ်လိမ့်မည်
ကောင်းပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Kubuntu ... xD နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်
Kubuntu ကသိပ်မကောင်းဘူး။ ငါတကယ်ကြိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် Canonical ကသူကိုမထောက်ပံ့တော့ဘူးဆိုရင်ရပ်ကွက်ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ငြီးငွေ့လာပြီး kubuntu နဲ့နည်းနည်းကစားရင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြယ်သခဲ့တယ်။
Kubuntu 12.10 32-bit သည်မည်သည့်အရာမျှမထိပါ
ကျွန်ုပ်သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်မှ Kubuntu သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစသည်ဖြင့်စသည်တို့ကိုဆွဲထုတ်သည်။ nepomuk ကိုချလိုက်သောအခါငါ openbox ထားသည့် window manager ကိုပြောင်းသည်။
ဒီမှာငါ 50mb စားသော VMWare ဖြစ်စဉ်ကိုသတ်ဖို့မေ့သွားတယ်၊ ဒါဆို 50 ကိုနုတ်ရမယ်၊ Kubuntu က 10hs ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။
အဲ့ဒီဖမ်းယူမှုအားလုံးဟာပလာစမာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ အကယ်၍ ငါယူချင်တယ်ဆိုရင် BE: Shell, ငါ plasma-desktop process ကိုသတ်ပစ်မယ်။
ငါ Kubuntu ကိုသဘောကျတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၉.၀၄ နဲ့ ၉.၁၀ တို့ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲဆိုရင်ငါ KDE ကိုကောင်းကောင်း run နိုင်တဲ့ distros တွေကိုစလေ့လာခဲ့ပြီး Arch know ကိုသိကျွမ်းလာခဲ့လို့ပါ။
ငါ Arch ကိုစတင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်၎င်း၏အင်ဂျင်နီယာများ၏အလှတရားရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါငါက / အိမ်, ချို / အိမ်ခဲ့သိတယ်။
ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မေးချင်ပါတယ် - အပေါ်ဆုံးဘားသည်ရိုးရာ KDE panel လား။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းတွင်မည်သည့် typeface ကိုသင်အသုံးပြုသနည်း။ panel ၏ခန့်မှန်းအရွယ်အစားမှာအဘယ်နည်း။ အရောင်ကိုသိမ်းဆည်းခြင်းသည် KDE ကို အသုံးပြု၍ MacOS တွင်ကျွန်ုပ်အနီးကပ်ဆုံးတွေ့မြင်ရသည့်အရာဖြစ်သည်။
KDE ရှိပြားများ၏အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍၊ သူတို့က OpenSUSE patch ကိုပေါင်းစည်းထားခြင်းမရှိသေးပေ။ သင်ကပိုကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ F / LOSS ဟုထင်ရသောအခါ panel သည်မည်မျှကြီးမားသည်ကိုအလိုအလျောက်ပြောပြလိမ့်မည်။ xDD
Msx ကအဲဒီ patch ကတည်ရှိသလား။ ဖြေ။ ။ နေရာတိုင်းမှာရှာဖွေနေတယ်လို့ငါကျိန်ဆိုတယ်။ မင်းမှာ link ရှိသလား။ ငါ Gentoo haha ​​မှာအလုပ်လုပ်နိုင်လားဆိုတာစမ်းကြည့်ရအောင်။ ငါ panel ကဘုံရင်းမြစ်ပဲ။ ယခုတွင်ငါသည်အိုင်ပက်ဒ်မှလာပါပြီ။ အဆင်မပြေပါ။ xD အမြင့်နှင့်တူညီပါသည်။ အကယ်၍ မှန်ကန်စွာမှတ်မိလျှင် font သည် sans serif ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်သည့်ဖောင့်များပြုလုပ်ရန်လျှို့ဝှက်ချက်သည် fon ချောချောမွေ့မွေ့လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသက်ဝင်စေဖို့၊ အပြည့်အ ၀ ချောချောမွေ့မွေ့တင်ပေးပြီး dpi နဲ့ကစားပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ ၁၂၀ ခုရှိတယ်၊
« Mxx ထို patch သည်တည်ရှိပါသလား။ : ဒါမှမဟုတ်နေရာတကာမှာငါရှာနေတာငါကျိန်ဆိုနေတယ်၊ ​​မင်းဆီမှာ link ရှိသလား။ ငါ Gentoo haha ​​မှာအလုပ်လုပ်နိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်တော့မယ်”
ငါသငျသညျဖျောပွ patch ကိုဆွေးနွေးထားတဲ့နေရာအများအပြားလင့်များထဲကတစ်ခု OR စွန့်ပစ်နေစဉ် OR တစ်ခု ojimeter အစားနံပါတ်များကိုအသုံးပြုပြီးပြားများ၏အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ခြေ> :(
«ဖောင့်တွေကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက် font smoothing options အားလုံးကို activate လုပ်ဖို့၊ “ full” ချောချောမွေ့မွေ့ထားရန်နှင့် dpi နှင့်ကစားရန်ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်တို့၌ 120 ရှိသည်။ »
Hmm၊ ဖောင့် antialiasing နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တကယ်မုန်းတီးတာကိုမရှင်းပြနိုင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ဒါကကျွန်တော်အမြဲတမ်း disable လုပ်တဲ့ပထမဆုံးပါ။ တေးရေးဆရာကခွင့်ပြုတဲ့အခါအရိပ်အမြွက်ကို light or medium သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ (KWIN မှာမဟုတ်ပါဘူး။ )
အမှန်တရားကတော့ငါ့ panel ကိုပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ် (၂၄px၊ အပို plasmoids များစသည်) စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ငါ yakuake မှစတင်ပြီးအက်ပလီကေးရှင်းများကိုပင်အသက်ရှင်စဉ်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည်အတော်လေးအဆင်ပြေပါသည်။ 😛
ငါအခြေခံစံနှုန်းများကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ငါပြန်ပြောပါလိမ့်မယ်, ငါငါ့အအရေးအသား Gentoo နှင့်အတူငါ့အကောင်းသော vibes ကြောင့်ပျက်စီးသွားသောဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့် Benchmark အလွန်ဟောင်းနွမ်းသော ._ ။ Gentoo 1.4 (သူတို့ကထုတ်ဝေမှု ၁၂ တွင်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်) လည်း GCC သည်အဆင့်မြင့်ပြီး multicore ပရိုဆက်ဆာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြadvancedနာရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ -O12 (သို့) -O3 နှင့်သင်တပ်ဆင်သောအခါသင်၏နှုတ်၌အရသာရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ like ကဆိုပါတယ် - benchmark:“ ယေဘုယျအားဖြင့် Gentoo ဟာ Debian နဲ့သူ့ရဲ့ precompiled binaries များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလုပ်အများစုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်အောင်စီမံနိုင်ပုံရသည်။ " အခုငါ graphite ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့သူကအရာရာကိုပိုပြီးမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာရိပ်မိနေတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသတိပြုမိလိုက်တယ်။ 😀
ဤ post ကိုသင်သိခဲ့လျှင်အလွန်ကောင်းသော x11tete11x xD ခဏစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ယခုအချိန်တွင်ငါ Gentoo တွင် X ကိုထည့်သွင်းနေပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ် install လုပ်သော Funtoo အစားထပ်မံကြိုးစားရန်သင်အားပေးခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိအရာအားလုံးအလွန်ကောင်းနေပြီးသင် paste ထဲထည့်လိုက်သောချိန်ညှိချက်များသည်ကျွန်ုပ်အားကောင်းကောင်းအကျိုးပြုသည်။ ငါရှိသည်တစ်ခုတည်းသောအကြပ်အတည်းအခါကလုပ်ဖို့ကပိုမှန်ကန်သည့်အခါစနစ်၏ပြီးပြည့်စုံသော update ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်၍ ပရိုဂရမ်များထပ်မံမထည့်သွင်းမီ gcc သည်ကျွန်ုပ်အားမွမ်းမံသည့်နေရာတွင်ပထမအကြိမ်ပြန်လုပ်ပြီးနောက်၎င်းကိုပြုလုပ်သည် ငါဒီ link တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နေပြီ။
PS: xorg-server ကိုအမှားအယွင်းမရှိစုစည်းပြီးသည်နှင့်သေချာဖတ်ပါကရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။ Blaire Pascal Crux သည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ၊ ဤဖြန့်ဖြူးမှုသည်သင်အမှန်တကယ်သင်ယူသည့်နေရာဖြစ်သည်။ လေးစားပါတယ်
တောင်းပန်ပါတယ်၊ freebsd (သို့) bsd derivative ကိုသင်သုံးပြီးသားလား။
ဟုတ်ပါတယ်, gentoo နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအဘယျသို့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသနည်း သို့မဟုတ်အားသာချက်များ။
မင်္ဂလာပါ။ pdf တစ်အုပ်လုံးကိုဖတ်ပါ။
FreeBSD အထက်အလွန်နိမ့်ကျစွာကျွန်ုပ်၌ယာဉ်မောင်းပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်စက်၏အအေးဓာတ်သည်အရူးဖြစ်သွားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကျွန်ုပ်သည်ခေတ်နောက်ကျသွားခြင်းနှင့် Linux kernel သည်မည်မျှလျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်နှင့် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါ Gentoo op ရွေးချယ်ခဲ့သည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ငါ gentoo vs freebsd ကိုသုတေသနလုပ်နေတာပါ။
သို့သော် gnu / linux သည်အခြေအနေအားလုံးနီးပါးအတွက်ပိုမိုပြင်ဆင်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်သည်။ ပိုပြီးခေတ်မီပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ဘာမှထက်ပို။
သင့်တက်ဘလက်မှာလည်း gentoo ကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့သလား 😀
ROFL !!! «ငါ့အတွက်သူမမျက်နှာကိုသာဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
ဟားဟား၊ iPad ပေါ်တွင် Gentoo ဖြစ်နိုင်သည်။ openiboot ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ ubuntu ကို install လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင် source code ကို compile လုပ်ရမှာဖြစ်သည်။ gentoo အရမ်းပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်😉
ဟားဟား၊ မ၊ ဤအိုင်ပက်သည်ကျွန်ုပ်၌အတော်လေးဆိုးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ကို တင်၍ ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှရှာဖွေသည်ကိုနှစ်သက်သည်။ အိုင်ပက်ဒ်တွင်ကျွန်ုပ်ခြေလက်နှင့်ခြေထောက်များကိုချည်ထားခြင်းသည်စနစ်သည်ကောင်းသော်လည်းရိုးရှင်းပါသည်။ ကြောင်း, အဘယ်သူမျှမ uu ပြုမိနိုင်ပါတယ်
Che, လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က gimmick ဖြစ်သောအိတ်ဆောင် Galaxy Note (၎င်းသည် ၇ it's ထင်သည်) ကိုပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာက menu ကိုသွားပြီးမည်သည့် Android version ကို run သည်ကိုကြည့်ရန်ဖြစ်သည် (7) ။ အဆိုပါဂျပိန်တစ် WTF မျက်နှာလုပ် !!! ပြီးတော့သူကဒီ xD ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူးဆိုတာဘာလဲလို့မေးတယ်
ကျွန်တော်ထင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝအလျောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအခြေအနေကိုအလွယ်တကူယူမှတ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်လူအများကြားတွင်များပြားလှသောအရာတစ်ခုမဟုတ်ဟုထင်မြင်ယူဆမိလျှင်၎င်းသည်မတည်ရှိပါ။ ဤအခြေအနေတွင် iOS နှင့် Metro တို့သည်အံဝင်ဂွင်ကျ - ကျွန်ုပ်တို့အတွက် Android လိုပဲ !!!
အသေးစိတ်တစ်ခုအနေဖြင့် Arch Linux ကိုရင်းမြစ်များမှလုံးလုံးလျားလျားပြုစုနိုင်ပြီး ဆက်လက်၍ ထိုနည်းအတိုင်းဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ system မှပေးသော packets အားလုံးသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာ PKGBUILD (EBUILDs နှင့်ဆင်တူ) ရှိသောကြောင့်အရင်းအမြစ်အခြေပြု distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ ABS, Arch Build စနစ်မှတဆင့်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။
ဒီနည်းကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမတပ်ဆင်ခဲ့ပါ၊ ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်မည်မျှလက်တွေ့ကျမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်သီအိုရီအရစက်ပြင်လျှင်ရိုးရှင်းပါသည်။ စုဆောင်းရန်အထုပ်၏ PKGBUILD ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ၊ ပါ ၀ င်မည့်အချက်များနှင့်အတူပြင်ဆင်ရန် (USE အလံများနှင့်တူသည်) ၎င်းကိုအခြားအထုပ်တစ်ခုပေါ်တွင်မှီခိုပါကထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပါ။
GNOME အထောက်အပံ့ကို KDE application များမှဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့် application နှစ်ခုကို frameworks နှစ်ခုလုံးတွင်ပြုလုပ်ထားသဖြင့်၎င်းသည်မည်မျှအသုံးဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာမသိပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သို့သော် Archlinux ABS သည်မှီခိုမှုများကိုအလိုအလျောက်မစုစည်းနိုင်ပါ၊ နောက်ပြီးအခြား compilation အလံများကိုလွယ်ကူစွာမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ သင်မှီခိုမှုကိုထည့်သွင်းပါက၎င်းသည် repository တွင်တည်ရှိသည်ဟုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှအာမခံချက်မရှိသကဲ့သို့၎င်း၏မူကွဲသည်သင့်လျော်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုကိုလိုချင်လျှင် PKGBUILD's အားလုံးတွင်ထည့်သွင်းရန်ထိုမှီခိုမှုကိုဖော်ပြရမည်။ မှီခိုမှုများ၏စုစည်းရွေးချယ်မှုများအပေါ်ကြိုတင်အတည်ပြုခြင်းလည်းမရှိပါ။ အခြားပြproblemနာတစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့သောရွေးချယ်စရာများသည် PKGBUILD's တွင်သာသွားပြီး generic files များတွင်မဟုတ်ဘဲ update လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
Gentoo ၏စွမ်းအားသည်တကမ္ဘာလုံး (အားလုံးသောပစ္စည်းများအတွက်) သို့မဟုတ်တိကျစွာ (တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုအများအပြားအတွက်) ရွေးချယ်နိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေတွင်တည်ရှိသည်။ ရင်းမြစ် tarball တစ်ခုချင်းစီ (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ USE variable များ) တည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုသောရွေးချယ်မှုများနှင့်မှီခိုမှုများ။ တပ်ဆင်ထားသည့်အရာကိုပိုမိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ဒေသခံနှင့်ပါ ၀ င်သည်။ Portage သည်စီစဉ်ထားသော package တစ်ခုစီအတွက်မှီခိုမှုများကိုကျေနပ်စေရန်လိုအပ်သောရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူမှီခိုမှုကိုပြုစုခြင်း၊ စုစည်းရန်စီစဉ်ထားခြင်းများကိုအလိုအလျောက်စစ်ဆေးသည်။ ထို့အပြင် အကယ်၍ အပြောင်းအလဲတစ်ခုတည်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာ USE တစ်ခုသို့ပြုလုပ်ပါက portage သည်ထိုပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်စေရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်စုဆောင်းနိုင်သည်။ Portage သည်မလိုအပ်သော package များကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်သည်။ emerge –depclean ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Gentoo သည်သင်၏ system အားအရင်းအမြစ်များမှအဆင့်မြှင့်ပါကပြောင်းလဲနေသောအချိတ်အဆက်များသည်တသမတ်တည်းရှိနေပြီးကွဲလွဲနေသောပြfixနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကိရိယာများကိုပေးသည်။ အလားတူစွာ configuration files များကိုတသမတ်တည်းနှင့်မွမ်းမံရန် tool (etc-update) တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလိုအလျောက်သို့မဟုတ်လက်စွဲဖြင့်ပေါင်းစည်းနိုင်သည်၊ ဖိုင်အသစ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
အထုပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် Gentoo သည်စမ်းသပ်မှုများနှင့် hard-masked များကိုတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအကြားရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ နှင့် slot နှစ်ခုကျေးဇူးတင်ပါကတစ်ပြိုင်နက်တည်းဗားရှင်းတစ်ခုထက် ပို၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်စစ်မှန်သောမှီခိုမှုထိန်းချုပ်မှုကိုလေ့ကျင့်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ dev-libs / nss ၌သာဤအရာများရှိသည်။
3.12.11-r1, ~ 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, ~ 3.13.5-r1, 3.13.6, 3.14 နှင့် ~ 3.14.1
Gentoo ၏ port collection သည်အရင်းအမြစ် packets ၁၆၀၀၀ ခန့် (ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်) သည်ဥပမာအားဖြင့် Debian stable ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကြီးမားသော software စုဆောင်းမှုကြောင့်လူသိများသည် source packet 16000 မှ binaries ၂၉၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အထုပ်များမလုံလောက်လျှင် developer များနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထပ်မံထည့်သွင်းသည့်အသိုင်းအဝိုင်းမှထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့်ထားသည်။
သင် Funtoo ကြိုးစားခဲ့သလား
Funtoo ကိုကျွန်တော်မစမ်းခဲ့ဘူး သို့သော်၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အရာများပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ebuilds (ပိုမိုထိရောက်မည်ဟုငါထင်သော) ကိုထပ်တူပြုရန် git အစား rsync ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ toolchain ကိုစုစည်းရန်အခြားရွေးချယ်စရာ (နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သော) နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ နှင့်အသုံးဝင်သောအခြားအချို့သောအင်္ဂါရပ်များ။
စကားမစပ်, Juan ကိုနစ်ခ်လိုနေရာချလိုက်တယ်ဆိုတာအခုမှသာနားလည်လာပြီ။ အခုတော့ငါဟာ Ankh (သို့) Rubiñoကိုအမြဲသုံးနေလို့ပါ။ ငါ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှမှတ်ချက်များပေးရန်သင့်အားအကောင့်တစ်ခုတောင်းဆိုသည့်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ င်ရန်ငါစိတ်ရှုပ်သွားသည်။
ငါ Funtoo နှင့်အနည်းငယ်ကစားသည်၊ ၎င်းကိုထည့်သွင်း။ မရပါ (ထိုအချိန်တွင် Gentoo နှင့် USE FLAGS မည်သို့ကိုင်တွယ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ဘူး) ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Funtoo မှာ profiles များမှာ“ profiles” မွမ်းမံထားခြင်းကြောင့်အသုံးပြုခြင်းအလံများနှင့်ပြproblemsနာတွေရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝါရင့် Gentoo ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အခုကြည့်လိုက်တော့ငါ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကအရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒါကလုပ်ဖို့ xD လုပ်ဖို့အရာအနည်းငယ်သာထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။
သငျသညျကိုကောင်းစွာညွှန်ပြအဖြစ်ဒါဟာ2နှစ် Arch, ABS တစ် 1 အထုပ်အနေဖြင့်, ကောင်းစွာ compile ရန်အလုပ်ဖြစ်တယ်သည်, ငါတို့သည် Gentoo ၌ရှိသကဲ့သို့ပြုပါရန်, ငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီအထုပ်နှင့်မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအဘို့လက်ဖြင့်လုပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါဟာအဘယ်သူမျှမမှတ် Portage နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်စရာရှိပါတယ် , အရာအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်စေသော၊ pacbuilder ဟုခေါ်သည့် portage ကိုအတုယူရန်ကြိုးစားသည့် program တစ်ခုရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်သင်၏မှတ်ချက်ကိုနားလည်လျှင်၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ precompiled Distro ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။
ကျွန်တော်ထပ်ထည့်ချင်သည် - Arch ၏ပုံမှန်အထုပ်မန်နေဂျာသည် pacman ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် binaries များနှင့်သေသပ်စွာကိုင်တွယ်သည်။ သို့သော်ဏ, ထိုရှင်းလင်းချက်တရားဝင်သည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ထင်မြင်ချက်နှင့် @ Juan ၏မှတ်ချက် ၁၀၀% သည်တိကျပါသည်
မေးခွန်းတစ်ခု။ gtk applications များအသုံးပြုပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် -gtk အလံသည်ဘာအတွက်ဖြစ်သည်။
Percaff ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြထားတယ်။ ငါ gtk ကို activate လုပ်တဲ့ packets တွေရှိတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့တစ်ခုခုသုံးဖို့သေချာတယ်။ သို့မဟုတ် work အလုပ်လုပ်ရန် gtk လိုအပ်လျှင်
Gentoo သည်အလေးစားဆုံးဖြန့်ချိသူများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးအားဖြင့်သော်လည်းဤဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပြည့်အစုံမှာလူအများအပြားက၎င်းကိုမတပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ဤပံ့ပိုးမှုများကြောင့်လူများသည် Gentoo အားပိုမိုနီးကပ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောစိုးရိမ်မှုမှာ Gentoo သည် ATI ကဒ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းများနှင့်ပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ အဲဒါမှန်ရဲ့လား၊
သငျသညျ bastard ယခုသင်တို့သည် gentoo install လုပ်ဖို့ငါ့ကိုစိတ်ပျက်အားလျော့။
ကောင်းပြီဒီ gentoo သို့မဟုတ် freebsd ။
စီးပွားဖြစ် ATi သည်မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမဆိုမကောင်းသောကြောင့် X ကိုမ run ဘဲကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်အောင်လုပ်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့် AMD သည်အမှားများပြုလုပ်သည်။
+1, AMD သည် Linux ပြproblemsနာများကိုပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူက Gentoo သာမကဘဲဖြန့်ဝေမှုအားလုံးသည်။
သို့သော်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုကိုမဖြေကြားခဲ့ကြပါ။ AMD သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အရည်အသွေးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Sabayon ကဲ့သို့သော AMD နှင့်မကိုက်ညီသောဖြန့်ဖြူးမှုများရှိပါသည်။ အခြားသူများသည်အနည်းငယ် ပို၍ သည်းခံတတ်ကြပြီး၊
ခဏစောင့်ပြီးငါ sabayon iso ကိုကူးယူပြီးပြီ။ ငါဒါကိုစမ်းသပ်တော့မယ်။
Radeon HD 6870 သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်၎င်းအတွက် kernel တွင်အချို့သောပြင်ဆင်မှုများကိုအသုံးပြုရမည်။ ထို့ကြောင့် Nvidia ထက်အခမဲ့ဒရိုင်ဘာများနှင့် AMD ဂရပ်ဖစ်အတွက်စီးပွားဖြစ်ဒရိုင်ဘာများတပ်ဆင်ရန်ပိုမိုအလုပ်များသည်။
ကောင်းပြီ sabayon live dvd ဖြင့် gentoo ကို x11tete11x tutorial နှင့် install လုပ်မည်ဖြစ်ရာ debian ဟုခေါ်သောဤအိပ်မက်ဆိုးကိုကျွန်ုပ်လုံးဝဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။
make.conf ဖိုင်တွင်ကြေငြာထားသောအလံများသည်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုသက်ရောက်သည်။ x11tete11x သည် gtk flag ကိုအချို့ application များအတွက်သာသတ်မှတ်ထားပြီး system တစ်ခုလုံးအတွက်မဟုတ်ပါ။ သင် /etc/portage/package.use ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်သည်။ မှားနေရင် x11tete11x ကသံသယကိုဖယ်ပေးလိမ့်မယ်။
ဤကဲ့သို့ ၀ င်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်၊ အကြောင်းမှာလူများသည် gentoo, distro « macho men များအတွက်»ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ ရိုးရာ” gentoo စင်ကြယ်သောခလုတ်တပ်ဆင်ခြင်းသည်လက်ဖြင့်ကိုင်ထားသည့်အတွက်နာရီများကိုစုဆောင်းထားခြင်းကြောင့်အချို့သောခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ အမှားအယွင်းများဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချရန်နှင့် (pc တွင်အခြားအရာများပြုလုပ်နိုင်ရန်) အမြဲတမ်းတပ်ဆင်ရန်ငါ gentoo live ဖြစ်သော SistemRecue CD မှ pendrive ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ခြင်းကိုပြသနာများနှင့်ရွေးချယ်မှုများတွင်ပြproblemsနာမရှိဘဲတပ်ဆင်စေသည် ( ubuntu live တွင်ဖြစ်ပျက်သည်။ ) လက်စွဲစာအုပ်မှ command များကိုကူးယူခြင်းနှင့်ပြသနာမရှိဘဲကူးယူခြင်း။ အကယ်၍ gentoo ကို graphically အသုံးပြုမည်ဆိုပါက kernel ကို xorg နှင့်လိုက်ဖက်ကြောင်းသေချာပါစေ ... ဒါကြောင့်လက်စွဲစာအုပ်နှင့် xorg ကိုနှစ်ကြိမ်ပြန်လည်စုစည်းရန်မလိုတော့ပေ။ xorg.conf ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လည်းရေးသင့်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် startup အမှားတစ်ခုရှိရင် live cd ထဲကို ၀ င်ပြီးအရာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပါ၊ စိတ်ရှည်ရှည်မပျောက်ပါစေနဲ့၊ အရာအားလုံးကိုလုပ်သလိုပဲ doing
ပြည်သူ့မိုက်မဲသောမေးခွန်းတစ်ခုကို၊ Post ကိုပြင်လို့ရလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအတော်များများကမတူကွဲပြားတဲ့ပြaboutနာတွေအကြောင်းပြောနေကြတာ၊ ဥပမာ Intel video card ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပါ။ ဒါကထိမိသင့်တာပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအဲဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့အနည်းဆုံးလူတစ် ဦး (ဝီကီပြောထားသလိုပဲ) ကလုပ်ခဲ့တယ်။ သူအဘို့အလုပ်မလုပ်ဘူး), ထို့နောက်နောက်ပိုင်းတွင်ငါသူတို့အားဖြေရှင်းချက်အားလုံးနှင့်ထိုပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်ပိုမိုတိကျတဲ့လင့်များထည့်သွင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်, သင်နိုင်မလား
အခြား pdf ထပ်ထည့်မလား။
အယူအဆကတော့အရာဝတ္ထုတွေကို PDF ထဲကိုထည့်ပြီးဗားရှင်းအသစ်တင်တာပါ။ (ကျနော့်ကိုယ်ပိုင်အတွေးကဒီလမ်းညွှန်ကိုဗီဒီယိုကတ်ပြားတွေလိုမျိုးအခြေအနေတွေအတွက်အကြံဥာဏ်တွေ၊ ဖြေရှင်းနည်းတွေစသဖြင့် update လုပ်ဖို့ပါ။ (nvidia နဲ့ KDE အတွက်သာကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်) ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအရာများ🙂) ဒါဆိုမင်းမှာဘာဘုတ်နဲ့မင်းဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်ကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုရင်ငါထပ်ထည့်ချင်တယ် (ပြproblemနာရှိရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ)
ယခုငါ gentoo ကို install လုပ်ပြီး ati radeon 6450 ကိုအသုံးပြုသည်။ မည်သို့သွားခဲ့သည်ကိုငါပြောမည်။
ဟုတ်တယ်၊ မင်းဒါကို upload လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်၊ ငါ့ကိုဒါမှမဟုတ် admins တစ်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးငါတို့ပို့စ်ကိုထည့်လိုက်မယ်။ 🙂
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ် install လုပ်သည့်စနစ်နှင့်ပါအမှားအယွင်းများတွေ့ရသည်😀
Sabayon 64 bit live live ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
compiling လုပ်တဲ့အခါအမှားတစ်ခုပို့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၃၂ bits ထဲမှာ kernel ကိုသွင်းပြီး ၃၂ မှာစင်မြင့်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တာ။
locale-gen ကိုသုံးသောအခါ es.MX-UTF-8 ကိုသုံးသောအခါ es.ES-UTF-8 အမှားတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ပေးပို့သည်။
ဒါပေမယ့်ဟေးငါတရားဝင် gentoo live cd ကနေမနက်ဖြန်မှာ install လုပ်မယ်။
sabayon က 50 gbs ထည့်ပြီးပြီ။ ဝိုး။
သငျသညျတူညီသောဗိသုကာ၏ Live CD ကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, နှင့် locale-gen အရာဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကအဲဒီမှာကရေးသားခဲ့သည်ပုံ၏ syntax အမှားနဲ့တူပုံရသည်,
သိမ်းဆည်း, ပြီးတော့ locale-gen ပါစေ
အမှု၌ xD သံသယရှိခဲ့:
KDE partitionmanager တွင်ကြည့်ပြီး Sabayon installation သည် 51 bgs ဖြစ်ပြီး gparted တွင် 21 gbs ဖြစ်သည်။
ATTENTION - သင်ခန်းစာ၏ KDE 4.9.5 ကိုထည့်သွင်းမည့်သူများသည် -
« Wget ပေါ်ထွက်လာ && wget http://git.overlays.gentoo.org/gitweb/?
p = proj / kde.git;a= blob_plain;f= မှတ်တမ်းတင်ခြင်း / package.keywords / kde-4.9.keywords »
wget သည်ဖိုင်ကိုကောင်းစွာဒေါင်းလုပ် ချ၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့်သင် /etc/portage/package.keywords/ အတွင်းရှိ link ကိုကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်ရိုက်ထည့်ပြီး ၄ င်း၏အကြောင်းအရာအားလုံးကို KDE-4.9.5.keywords ဖိုင်တွင်ကူးယူရမည်
နောင်တွင်ဤ PDF ပြင်ဆင်ချက်အသစ်ကိုကျွန်ုပ် upload လုပ်သောအခါ၊ ငါဤပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းပေးမည်။ ငါသည်လည်းသင်ခန်းစာ၏မူကွဲတစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသင်သိစေရန်« ChangeLog »ကိုလည်းထည့်ပါလိမ့်မည်။
ကား _၉၆ ဟုသူကပြောသည်
ဤသင်ခန်းစာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ နက်ဖြန်နေ့တွင် Gentoo ကို Fedora iso အသစ်ဖြင့်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်စီစဉ်သည်
F18 ပြီးသား O_o ထွက်လာမယ့်နေသည် ??? ဒီဗားရှင်းအတွက်လမ်းပြမြေပုံကိုသင်တွေ့လား။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် F18 သည်တော်လှန်ရေးဖြစ်လိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ။ သင်ခန်းစာ၏အဆင့်တိုင်းသည်မှန်ကန်နေဆဲ (သို့) ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အပိုထောက်ခံချက်များရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည် Gentoo ကို install လုပ်တော့မည် ဖြစ်၍ ဤ distro နှင့်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါစာကိုနောက်တစ်ခါမလိုက်ခဲ့ဘူး၊ Gentoo လက်စွဲစာအုပ်ကသင့်ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ chroot မလုပ်မချင်းသင်ခန်းစာကိုငါလိုက်ခဲ့တယ်၊ ပြီးရင်ငါ့ရဲ့ make.conf ကိုဥပမာအနေနဲ့ယူကြည့်ပါ။ USE variable တွင်ပစ္စည်းများစွာနှင့်ကုန်ချရန်အလွန်အကျွံမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တရားဝင် Gentoo လက်စွဲစာအုပ်ကိုလိုက်ခဲ့သည်
Potenza: ကျွန်ုပ်တို့၏ Linux အတွက်အသစ်သောလှပပြီးပြည့်စုံသောအိုင်ကွန်အစုံ